> Resource> Naghachi> Digital Media Iweghachite: Olee naghachi Lost Digital Media File
Olee Otú M Pụrụ Naghachi ehichapụ Digital Media File?
Hey, obere nwa m nwanyị na mberede ehichapụ ụfọdụ dijitalụ media faịlụ site na m mpụga ike mbanye. Ha bụ ụfọdụ foto na vidiyo. O di nwute na m na-adịghị ihe ọ bụla ndabere nke ha. Enwere ụzọ na m nwere ike iweghachi ha? Ha na na na otú dị oké ọnụ ahịa m. Biko nyere m aka!
Naa, dijitalụ media dị ka videos, foto na songs na arụ orụ di a nnọọ oké mkpa ná ndụ kwa ụbọchị. Otú ọ dị, dijitalụ media ka nwere ike ga-efu na kọmputa gị, igwefoto dijitalụ ma ọ bụ nchekwa ngwaọrụ n'ihi nhichapụ, formatting, nrụrụ aka, virus agha ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Atụla egwu! Na ị na-yiri ka naghachi furu efu dijitalụ media faịlụ dị ka ogologo oge ọ bụghị overwritten site ọhụrụ data.
Naghachi dijitalụ media faịlụ, i apụ kwụsị etinye ọhụrụ ọ bụla data gị mbanye ma ọ bụ nchekwa na ngwaọrụ na mgbe ahụ a pụrụ ịdabere na dijitalụ media mgbake omume maka enyemaka. Ga-amasị m ka nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. Nke a kacha ngwa-enyere gị aka naghachi nile di iche iche nke dijitalụ media faịlụ site na kọmputa gị mbanye ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa na ngwaọrụ, gụnyere videos, foto na audio faịlụ.
Ihe omume ahụ bụ Ofụri Esịt dakọtara na Windows PC na Mac ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute naghachi dijitalụ media faịlụ ugbu a!
Igosi Digital Media Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ebe a ka na-amalite Digital media mgbake na Windows version. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike hazie mgbake ke otu nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi furu efu dijitalụ media faịlụ
Mgbe wụnye na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery omume na kọmputa gị, mkpa ka ị họrọ a mgbake mode na-amalite.
Naghachi furu efu dijitalụ media faịlụ, "Echefuola File Iweghachite" mode nwere ike ịbụ a mma-agbalị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake dijitalụ media faịlụ site na kọmputa gị, i kwesịrị wụnye ihe omume na ndị ọzọ na draịva / partitions na kọmputa gị. E wezụga, i kwesịrị jikọọ gị nchekwa na ngwaọrụ gị na kọmputa ma ọ bụrụ na dijitalụ media na-efu site na ya.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi / ụgbọala anya n'ihi na furu efu dijitalụ media faịlụ
Ebe a gị na mkpa iji họrọ nkebi / mbanye ebe gị dijitalụ media faịlụ furu efu si na pịa "Malite" button ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
"Kwado Deep iṅomi" nhọrọ na-enyere aka iṅomi formatted dijitalụ media faịlụ site na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3 naghachi furu efu dijitalụ media faịlụ
Hụrụ faịlụ na scanned nkebi / mbanye ga-ndepụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "ụzọ" udi. Ị nwere ike ele faịlụ aha ma ọ bụ preview oyiyi na-ego otú ọtụtụ nke furu efu dijitalụ media faịlụ nwere ike gbakee.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ gị furu efu dijitalụ media faịlụ na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Ị nwere ike ghara ịzọpụta natara dijitalụ media faịlụ ka ya mbụ ọnọdụ iji zere data overwritten.
Olee otú idozi "ghara ịdị irè nkebi table" nsogbu
Pentax Photo Recovery: Olee naghachi Photos si Pentax Igwefoto
Olee otú Naghachi Photos / Videos si Kingston Kaadị ebe nchekwa